Wadamada soo saara tamarta dabaysha ee maanta | Cusbooneysiinta Cagaaran
Manuel Ramirez | | La cusboonaysiiyay 05/04/2019 14:51 | Awoodda dabaysha, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
La Tamarta dabayshu waa mid ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee isbeddelka xilligan jihooyin kale oo aan shaqo ku lahayn isticmaalka shidaalka. Kaliya waa inaad ogaataa in ugu yaraan 84 dal oo adduunka ah ay isticmaalaan tamarta dabaysha si ay u siiyaan shabakadooda korantada.
Kaliya sanad kahor awooda dabaysha dhaaftay 369,553 gW iyo wadarta wax soo saarka tamarta ayaa si xawli ah u koraya si ay u noqoto boqolkiiba 4 wadarta korantada guud ee laga isticmaalo meeraha. Haddiise 17 gW la rakibay 2014 ay horeyba guul u ahayd, qeybtii hore ee 2015 waxay gaareen 21,7 gW, taas oo na gaarsiinaysa awoodda adduunka ee 392 gW, oo qiyaastii ah 428 gW dhamaadka sanadkan. 2015.
Awoodda adduunka ayaa korodhay bilaha ugu horreeya ee 2015 boqolkiiba 5,8 ka dib markii aan ku guuleysanay 5,3% 2015 iyo 4,9% in 2013 isla mudadaas.Haddii aan tixgelinno in 2014 kororka sanadlaha wuxuu ahaa 16,5 boqolkiiba sidaa darteed bartamaha sanadka 2015 waxaa la gaari doonaa 16,8 boqolkiiba, waan la socon karnaa sanadka weyn waxaan ku dhegan nahay 2015.
Kordhinta isticmaalka awoodda dabaysha ayaa sabab u ah inta badan faa'iidooyinka dhaqaale Laga soo bilaabo ilahaan, kororka tartanka, hubin la'aanta ku jirta saliida iyo gaaska adduunka iyo cadaadisyada loo wajahayo teknoolojiyada nadiifka ah ee joogtada ah waqtiga.
1 Soosaarayaasha ugu muhiimsan ee tamarta dabaysha
3 Wadamada kale ee muhiimka noqon doona
4 Tamarta dabaysha ee mustaqbalka tamarta
5 Cilmi baarista iyo horumarinta tikniyoolajiyadda cusub
6 2016 waa sanad aad muhiim ugu ah tamarta dabaysha
Soosaarayaasha ugu muhiimsan ee tamarta dabaysha
Warshadaha dabaysha ayaa ah hadda waxaa gacanta ku haya warshado kala duwan oo wanaagsan awood ballaaran, iskaashatooyinka tamarta ee kooxaha deegaanka. Waxaa la ogyahay in guusha weyn ee noocan ah ilaha tamarta xitaa noocyo badan oo ka mid ah loo baahan doono.
Dhamaadka Juun 2015, dalka oo leh Awoodda dabaysha ee la rakibay waa tan Shiinaha kaalinta koowaad, waxaa ku soo xigay Mareykanka oo kaalinta labaad ku jira iyo Jarmalka oo kaalinta saddexaad ku jira.
Shiinaha wuxuu leeyahay 124 gW sanadkan iyo wuxuu ku kordhay 10 gW ilaa 2014 iyo 44 gW ilaa 2013. Kobaca isdaba jooga ah ee caawinaya, qayb ahaan, si loo yareeyo dhibaatooyinka wasakheynta, inkasta oo ay u baahan doonto inay lacag badan geliso noocan ah isha si ay si dhab ah ugu yaraato.
Midda xigta waa Mareykanka oo leh 67 gW rakibay Kobcintiisana tan iyo 2013, laba sano gudahood, awoodeeda waxay ku kordhay 8 gW oo leh fadhiidnimo dhab ah, wax sidoo kale laga arki karo Jarmalka, Hindiya iyo Spain, dabcan, marka la barbardhigo kobaca weyn ee Shiinaha.
Marka laga reebo awoodaha waaweyn ee awoodda dabaysha, waxaa lagama maarmaan ah sheeg Brazil oo muujisay saamiga ugu sareeya kobaca dhammaan suuqyada oo leh 14% kobaca sannadkan 2015.
Sida dhib xun waxaan helnaa dhowr suuq oo Yurub ah curyaamisay, wax ku dhici doona Jarmalka markii isbeddelada qaarkood ee qawaaniinta ay galaan labada sano ee soo socota, wax yareynaya awoodda tamarta dabaysha.
Shiinaha waxay rajeyneysaa inay yeelato 347,2 gW sanadka 2025 oo leh qalab sanadle ah oo gaari doona 56,8 gW. Wax aad muhiim u ah waxa noocan oo kale ah ee tamarta ah ay u yeelan doonto waddankan.
In kasta oo Shiinuhu hadda yahay midka ugu sarreeya ee noocan ah tamarta, haddana runti waxay ku jirtaa daqiiqad fadhiid ah. Tirooyinka la heli karo 2025 adduunka ayaa ka badnaan doona 962,6 gW taas oo macnaheedu yahay in Shiinuhu noqon doono, xitaa dib u dhacan, mid ka mid ah ciyaartoyda ugu waaweyn ee noocan ah tamarta meeraha.
Si hufan ayay ku jirtaa sannadkan in la saadaaliyay in Shiinaha aan loo kala saari doonin oo keliya sida rakibidda tamarta dabaysha ugu weyn by 2015, laakiin sidoo kale wuxuu sii wadi doonaa hogaaminta waaxdan sanadka 2016.
Wadamada kale ee muhiimka noqon doona
India, Australia, Japan, South Korea, Philippines, Thailand, iyo Taiwan Kordhiyaan awoodooda 148,2 gW sanadkii 2014 ilaa 437,8 gW oo leh saamiga guud ee adduunka oo gaari doona 45,5%.
Wadamada kale ee waaweyn guusha tamarta dabaysha waa Argentina, Brazil, Chile, Colombia iyo Mexico oo ku dari doona 45,6 gW. Waxaan hore uga soo hadalnay Uruguay iyo Costa Rica inay yihiin laba ka mid ah tusaalooyinka ugu waaweyn ee fulinta siyaasadaha u oggolaanaya koritaanka noocan ah tamar nadiif ah, wax muhiim u ah mustaqbalkeenna.
Tamarta dabaysha ee mustaqbalka tamarta
Tamarta noocan ahi waxay noqotay kharash aad u fara badan. Meelaha ay ku sii kordheyso isticmaalka tamarta, ilaha cusub waa in la abuuraa, waana halka ay tahay in awoodda dabayshu ay ka ciyaarto door aad u muhiim ah
Suuqyada qaangaarka ah ee kaabayaasha dhuxusha, nukliyeerka ama dhalinta gaaska ay horayba u jireen, waxaa jira caqabado badan oo horyaala sababo la xiriira isbeddelka weyn ee ay tahay inuu dhaco. Waa halkan halkaasoo tamarta dabaysha ay tahay inay la tartanto kharashka dayactirka ilaha tamarta ee hadda jira. Weli, isha tamarta ee dabayshu waa ikhtiyaar aad u soo jiidasho leh, marka laga reebo xaqiiqda ah inay bixiso tamar iyada oo aan la sii deyn gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo.
Waxay sidoo kale leedahay wax u socda iyaga oo iyagu yareeya kharashyada Waxaa jira saddex sababood oo waaweyn. Mid waa marawaxadaha dabaysha way sii gaboobayaan, oo leh munaarado dhaadheer iyo dhisme fudud. Midda labaad ayaa ah in waxtarka silsiladda sahayda ay korodhay oo nidaamyada waxsoosaarku ay yareeyaan kharashyada Midda saddexaad, uguna dambayn, ayaa ah in markii rakibidda dabayshu sii kordhayso, kharashyada lagu keydinayo iyadoo lagu soo saarayo baaxad ka weyn sidii ay markii hore ahayd.
Mid kale sababaha ugu waaweyn ayaa ah isbedelka cimilada iyo saameynta ay yeelan karto tamar nadiif ah oo raqiis ah oo waarta waqti ka dib. Bixinta tamartaas lagama maarmaanka ah si adduunkan aan ku nool nahay uu u shaqeeyo isla mar ahaantaana uusan u keenin qiiqa CO2 hawada, waa ujeeddada shirkadaha waaweyn sida Vestas.
Cilmi baarista iyo horumarinta tikniyoolajiyadda cusub
Waa mid aad u maalgashi muhiim ah oo ku saabsan teknolojiyadda cusub sidaa darteed waxtarka tamarta ee marawaxadahaas iyo hal-abuurnimada kaladuwan waxay u horseedaan wadooyin kale oo ay ka fulin karaan boqolley sare isticmaalka adduunka ee tamarta laga helo tamarta dabaysha.
Waxaan aragnay shaqsiyaad caan ka ah heerka Bill Gates waxay gashanayaan lacag aad u tiro badan xagga tikniyoolajiyadda tamarta cusub sida 2.000 oo milyan oo doolar oo ay adeegsatay
Waxay ka timid kooxaha teknoolojiyadda kuwaas oo ku dhiirrigelinaya inay tahay inaan beddelno habka loo arko jaangooyada tamarta ee aan ku jirno. Haddii aan ka faalloonay Gates, mid kale oo weyn sida Mark Zuckerberg iyaguna iyaguna xoogooda ayey sameynayaan ciid si loo dhiirrigeliyo shirkado badan oo gaar loo leeyahay inay raadiyaan mustaqbal nadiif ah dhammaan iyo meeraha waara.
Google waxay leedahay mashruuc kale oo weyn Afrika halkaasoo ay ka rakibi doonto in ka badan 365 marawaxadaha dabaysha ah xeebta harada Turkana ee Kenya. Taas oo bixin doonta boqolkiiba 15 wadarta isticmaalka korontada ee dalkan.
El keydinta tamarta Waxaa sidoo kale la muujiyey inay muhiim u tahay dhammaan isbeddeladan loo baahan yahay inay dhacaan tan iyo kaydinta tamarta dheeraadka ah ee ay boqolaal marawaxadaha dabeylaha ahi keeni karaan ay muhiim u tahay xitaa xoojinta isticmaalka il tamar sida tamarta dabaysha.
Tesla iyo baytariyada gurigeeda waxay muujinayaan waddo kale, laakiin halkii ay noqon laheyd isku kalsooni Tamarta isticmaaleyaasha, laakiin marka loo eego baaxad weyn waxay sidoo kale siin kartaa baytariyada lagama maarmaanka u ah "keydinta" wixii soo kordha.
Waxaan sidoo kale leenahay farsamooyin cusub sida marawaxadaha aan lahayn garbaha la abuuray by Vortex, oo ah shirkad Isbaanish ah oo hada ka dhawaqaysa waxyaabo badan sababo la xiriira isku-darka qaar ka mid ah marawaxadaha dabaysha oo aan si dhib leh u keenin saameyn deegaanka ah, maadaama laga reebo baabi'inta buuqa kuwa dhaqanka ka sii badan, iyagu ma beddelaan deegaanka sida ay yeelaan
Tikniyoolajiyadda Vortex-ka waxay u shaqeysaa sidan oo kale isticmaalaa cilladaha la soo saaray by gariirka ee ay keento dabayshu markay gelayso resonance-ka dhululubada toosan oo adag oo salka ku haya. Waa cilladaan ayaa masuul ka ah soo saarista korantada.
2016 waa sanad aad muhiim ugu ah tamarta dabaysha
Shirkii Cimilada ee Paris heshiisyo taxane ah ayaa la gaadhay taasi waxay sanadka 2016 u dhigtay sanad muhiim ah sidaa darteed boqolleydaas awooda tamarta dabaysha ay tahay inay si aad ah kor ugu kacdo sababo aan wada ognahay awgeed.
Xigasho cimilada ay ku jirto tamarta dabaysha sida mid ka mid ah ilaha tamarta muhiimka ah hoos u dhigista gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ee jawiga u keenaya dhibaatooyinka iyo aafooyinka dabiiciga ah ee adduunka oo idil. Isbeddel ay tahay in laga sameeyo dhammaan qaybaha adduunkan si ay u hesho natiijo weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Awoodda dabaysha » Wadamada hada soo saara tamarta ugu badan ee dabaysha
Fikradda ah in la abuuro beero dabayl badan si loo hagaajiyo deegaanka in yar ayaa aad u fiican
Ku jawaab Douglas_dbsg
way fiicantahay inay iga caawisay iskuulka ...: p
Ku jawaab lucy sosa
oooooooooooy waa wax weyn
tamar cawlan dijo
Iyo kor u kaca waxa wanaagsan
Ku jawaab energiagris
darian ramones dijo
Tani waxay iga caawisay dugsigayga waxaanan helay A
Jawaab dariana ramones
flores torres dijo
Waxay sidoo kale ii adeegtay dugsigayga waxaanan qaatay mid sida dariiana ramones ah
Ku jawaab florencia torres
Waxaan u maleynayaa inay fiicantahay inay tixgeliyaan deegaanka.
Tamarta dabayshu waa fikrad aad u fiican!
Waxaan haynaa tikniyoolajiyad cusub oo keydinta tamarta laga dhaliyo tamarta qorraxda iyo dabaysha xilliyada la soo saarayo iyo, inaan awoodno inaan u adeegsanno xilliyada isticmaalka ugu badan ee aan had iyo jeer ahayn xilliga jiilka
Haddii aad xiiseyneyso, nala soo xiriir info@zcacas.com
Waxaan baarey arintan 30 sano ka hor, waxaan patentiyey dhowr mashruuc laakiin labo waa wax gaar ah, mid leh awood dabayl qaabeysan iyo tan kale hirarka bada. Ilaa hadda ma heli karo habka aan u suuq geyn lahaa. Waxaan u arkaa inay tahay mid deg deg ah inaan ka baxo nidaamka munaaradaha waaweyn, oo leh faasas jiif ah, mid kale oo wax ku ool ah iyo hirarka mowjadaha awgood, si loo soo jeediyo xalka ujeedooyinka warshadaha, oo aan ilaa hadda dhicin Waxaan u furnahay xiriirada si aan ugu sii socdo wadadan muhiimka ah.
Jawaab nelson sabino jaque bustos
Go'aan fiican Exc